SEMPAMA : Mitaky vahaolana amin’ireo depiote 73 -
AccueilRaharaham-pirenenaSEMPAMA : Mitaky vahaolana amin’ireo depiote 73
Hifoteran’ireo sendika nataony fitaovana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai ireo depiote miisa 73. “Ireo depiote milaza fa ho an’ny fanovana ireo no niantso anay sendika nidina teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai, ary nanome toky fa hanova ireo zavatra tsy nety sy hamaly ny fitakianay” hoy i Ratolojanahary Arsène filohan’ny Sempama nosy. Roboka noho izany ireto mpitarika sendika ireto, ary dia nitanisa ireo izay noheveriny fa maharary azy eo amin’ny sehatry ny asa ataony teny imasom-bahoaka. Rehefa tratran’ireto depiote anefa ny tanjony, dia tsy nisalasala izy ireo namonjy ny lapam-panjakana misy azy, ka navelany ho kamboty teo ireto sendika. “Mangatsiatsiaka ireto depioten’ny fanovana ankehitriny, ary toa nanadino ny fanomezan-toky nataon’izy ireo” hoy hatrany ny mpitarika ny Sempama. Takian’ireto sendikan’ny mpampianatra ireto araka izany ny hanatanterahan’ireo depiote miisa 73 ny toky nomeny teny an-kianja, dia ny famahana ny olana mianjady amin’izy ireo. Takian’ireto mpitarika sendika ireto ihany koa ny hitondran’ireo depiote tao anatin’ireo 73 lasa minisitra vahaolana amin’ny fitakiana nataon’izy ireo. Tsara toerana hanao izany mantsy ireo depioten’ny fanovana lasa minisitra ireto, satria efa manam-pahefana ankehitriny.
Tsy nitondra fiovana
Resaka nentina nakana ny fon’ireo sendika fotsiny araka izany izay nolazaina teny an-kianja. Taty aoriana vao tsapan’ny ankamaroan’ireo sendikalista, fa hay natao fitaovana nentina nanakorontanana ny firenena ihany izy ireo nandritra ireny hetsika ho an’ny fanovana ireny. Tsy hita akory mantsy izay fanovana nentina rehefa nahazo seza fa toa ny omaly tsy niova, ary ny tena loza dia vao mainka tsy nahomby noho ny teo aloha aza ireo depioten’ny fanovana nomena seza tao anatin’ny governemanta. Nihevitra ireto depioten’ny fanovana ireto fa ho vita mora foana ny nampiesona ireto olona nataony fitaovana nanakorontanana ny firenena teny an-dalambe, ny mifanohitra amin’izany anefa no mitranga ankehitriny, satria dia izy ireo indray izao no hadinin’ireo “mpitolona” tamin’ny fampandriana adrisa nataony. Andrasana araka izany ny vahaolana feno fanovana entin’ireto depiote miisa 73 amin’izao fotoana nahatraran’izy ireo ny tanjony izao. Mba te hiara-hiravaka ny vanginy amin’izy ireo ihany koa mantsy ireto mpitarika sendika raha ny fitakiana ataon’izy ireo ankehitriny. Ireo depiote miisa 73 izay nanao hevi-petsin’ny kanosa ihany satria na ny nisaotra ireo olona nataony fitaovana teny an-kianja aza tsy nataon’izy ireo akory.